नवमीको रात मान्छेको मासु काटेर चढाइन्छ पाटनको यो मन्दिरमा :: Setopati
नवमीको रात मान्छेको मासु काटेर चढाइन्छ पाटनको यो मन्दिरमा
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज २८
पाटनको सुबहालस्थित जय मनोहर महाविहार र त्यसैको देब्रेपट्टि महांकाल मन्दिर। दसैंमा नवमीको रात यहाँ भक्तजनहरूले आफ्नै शरीरको छाला काटेर चढाउँछन्। तस्बिर: सुदीप श्रेष्ठ/सेतोपाटी
म तपाईंहरूलाई यही पूजाविधि र यसको कथा सुनाउँदैछु।
महांकाल मन्दिर देखाउँदै सुबहालका स्थानीय किरण शाक्य। तस्बिर: सुदीप श्रेष्ठ/सेतोपाटी
महांकाल मन्दिरमा टांगिएको निलो पर्दा। तस्बिर: सुदीप श्रेष्ठ/सेतोपाटी
महांकाल मन्दिरमा शरीरको छाला काटेर चढाइँदै। तस्बिर सौजन्य: किरण शाक्य
किम्बदन्तीअनुसार, जब हाँडीगाउँमा आगो लाग्यो, त्यहाँको एउटा समूह सुरक्षित स्थान खोज्दै इमाडोल सर्‍यो। उनीहरूले आफ्नो आराध्य चैत्य सँगै लगेका थिए। बसाइँ सर्दा एउटा चिलले बाटो देखाएको विश्वास गरिन्छ।
समयक्रममा उनीहरूलाई विभिन्न कारणले इमाडोल बस्न गाह्रो हुन थाल्यो। त्यो पानीको अभाव हुनसक्छ वा सहरबाट निकै टाढा भएकाले पायक नपरेको पनि हुनसक्छ!
रोगव्याधीको प्रकोप, जंगली जनावरको डर वा जीविकोपार्जनमा आएको संकट पो हो कि!
कारण जेसुकै भए पनि गाउँका सबैले छलफल गरेर फेरि अन्यत्र बसाइँ सर्ने छिनोफानो गरे। यसपालि पनि उही ‘दैवी’ चिल उनीहरूको बाटो देखाउन आइपुग्यो।
त्यो चिल इमाडोलबाट उड्दै उड्दै अहिले सुबहाल भएको ठाउँको मसानघाटमा आएर थपक्क बस्यो।
गाउँलेहरू दोधारमा परे।
उनीहरू सहर नजिकै बस्न पाएकोमा खुसी त थिए, तर आँखैअगाडि मसानघाट! कसरी बसोबास गर्नू!
मार्गदर्शक बनेर आएको ‘दैवी’ चिलले नै मसानको ठेगाना देखाइदिएपछि उनीहरूले नाइँनास्ती पनि गर्न सकेनन्।
यो असमञ्जसमा राजा इन्द्रदेव सहयोग गर्न अघि सरे। उनले सुबहालको मसान बालकुमारी सारेर त्यसको ठाउँमा महाविहार स्थापना गराए। र, त्यसैको वरिपरि नयाँ बस्ती बसाले।
लिच्छविकालीन मसान झल्काउने आकृति। तस्बिर: सुदीप श्रेष्ठ/सेतोपाटी
यो त भयो बस्ती र विहार स्थापनाको कथा। अब कुरा गरौं, मान्छेको मासु चढाउने संस्कारको।
जब राजा इन्द्रदेवले सुबहालको मसान हटाएर बस्ती बसाउने निर्णय गरे, यसले मान्छे त खुसी भए, तर मसानमा बस्ने महांकाल रिसले चूर भएछन्।
आफूलाई उठिबास लगाउन खोजेको झोँकमा उनले हरेक दिन बस्तीका कोही न कोही मान्छे मारेर खान थाले।
महांकालको रौद्ररूपले मान्छेहरूमा त्राहीत्राही मच्चियो।
उनीहरूले सामूहिक प्रार्थना गरे, ‘हे महांकाल, तपाईंले दिनहुँ मान्छे मारेर खाइदिँदा ज्यानको रक्षा भएन। बस्तीका हरेकलाई मृत्युको भयले सतायो। त्यसैले हे प्रभु, हामीलाई यो त्रासबाट त्राण दिनुस्। बदलामा हामी हरेक वर्ष कुलको एक जना पुत्रलाई तपाईंको नाममा बलि चढाउने छौं।’
स्थानीयको पुकार र प्रतिज्ञा सुनेर महांकाल राजी भए।
सुबहालमा दिनैपिच्छे हुने हत्या रोकियो। स्थानीयले चैनको सास फेरे। तर, त्यो चैन वर्षको एकदिन घनघोर चिन्ता बनेर मडारिन थाल्यो।
प्रतिज्ञाअनुसार कुलको एक जना छोरालाई महांकालको बलि चढाउन सजिलो थिएन। आमा शोकले मुर्छा पर्थिन्। पिता रन्थनिन्थे। बलि चढ्नुअघि पुत्रको चित्कारले सुबहालमा प्रत्येकको छाती चिरिन्थ्यो।
तै उनीहरूसँग विकल्प थिएन। हरेकको ज्यानमाथि खतरा मोल्नुभन्दा कागतीझैं मुटु निचोरेर छोरा त्याग्न तयार भए।
यसरी थुप्रै काल बिते। बर्सेनि एउटा छोरा बलि दिँदादिँदै कुलमा बलि दिने छोरा नै सकिने अवस्था आयो।
‘कस्तो प्रस्ताव?’ महांकालले सोधे।
‘प्रभु, या त हामी अन्तिम पुत्र बाँकी छउञ्जेल बलि चढाएर यो प्रथा सदाको निम्ति अन्त्य गर्छौं, या हरेक वर्ष एक जना पुत्रको सट्टा धेरै मान्छेको शरीरबाट थोरै थोरै मासु चढाउँछौं?’ उनीहरूले हात जोडेर बिन्ती गरे, ‘दोस्रो विकल्प मान्नुभयो भने हाम्रो कुल रहेसम्म यो प्रथा जारी रहनेछ। हजुरले कुनै वर्ष भोकै बस्नुपर्ने छैन।’
सुबहालका बासिन्दाको प्रस्ताव महांकाललाई चित्त बुझ्यो।
उनी दोस्रो विकल्पमा राजी भए। यसको बदलामा यो प्रथा रहेसम्म सुबहालको रक्षा गरिरहने बाचा पनि गरे।
‘त्यही भएर आज पनि हामी आफ्नो शरीरको थोरै मासु काटेर महांकाललाई चढाउँछौं,’ मेरा गाइड किरण शाक्यले भने, ‘यसको सट्टा महांकालले हाम्रो टोल र हामी सबैको रक्षा गरिरहेका छन् भन्ने विश्वास छ।’
किम्बदन्ती भनेको कथ्य र तथ्यको मिश्रण हो। यहाँ चिलले बाटो देखाएको र महांकालले मान्छे मारेर खाएको भनाइलाई कथ्य मान्न सकिन्छ। त्यसो त समुदायको सुरक्षानिम्ति व्यक्ति विशेषको ज्यान अर्पण गर्ने चलन प्राचीन इतिहासहरूमा नभएको होइन। यसलाई नै 'नरबलि' का रूपमा लिने गरिन्छ। यहाँ त्यस्तै नरबलिको प्रथा थियो होला भनेर मान्न पनि सकिन्छ।
यी कथ्यले प्राचीन काठमाडौंको एउटा तथ्य भने उजागर गर्छ।
लिच्छविकालीन राजधानी हाँडीगाउँमा कुनै समय ठूलो विपत आएर मान्छेहरू लाखापाखा लागेको र त्यसैमध्येको एउटा समूह इमाडोल हुँदै सुबहाल बसाइँ सरेको तथ्य हुनसक्छ। अर्थात्, लिच्छविकालको उत्तरार्द्धमा हाँडीगाउँबाट सर्नेहरूमध्ये सुबहालवासीका पुर्खा पनि थिए भनेर हामी मान्न सक्छौं। यसले काठमाडौं इतिहासको एउटा कालखण्ड झल्काउँछ।
यसलाई पुष्टि गर्ने एउटा चिनो अझै पनि इमाडोलमा छँदैछ।
इमाडोल, खरिबोटनिर पहेँलो र रातो रंगको जुन चैत्य हामी देख्छौं, त्यो तत्कालीन हाँडीगाउँवासीले आफूसँगै ल्याएका हुन्, जसलाई उनीहरूले त्यति बेलै इमाडोलमा प्रतिस्थापन गरेका थिए।
उनी सानो छँदासम्म इमाडोल चैत्य वरिपरिको सम्पूर्ण जग्गा यसकै गुठीको थियो। सहर विस्तारसँगै जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गयो। चैत्यको चारकिल्ला खुम्चिँदै गयो।
‘अहिले सबै जग्गा मासिएर चैत्य मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यो हाम्रा पुर्खाको धरोहर हो।’
इमाडोलको चैत्य, जुन सुबहालका बासिन्दाको आराध्य हो। तस्बिर सौजन्य: किरण शाक्य
उनले किम्बदन्तीसँग मेल खाने अर्को तथ्य पनि सुनाए।
उनले त्यति बेला आफ्नो कौतूहल मेट्न बूढापाकालाई सोधेका रहेछन्, ‘हाम्रो समुदाय किन यति सानो?’
बूढापाकाले जवाफ दिएछन्, ‘हाम्रा पुर्खाले आफ्ना पुत्रहरू पालैपालो देउतालाई चढाए, त्यही भएर हामी थोरै भयौं।’
समुदाय ‘सानो’ भए पनि प्राचीन संस्कृति जीवित राख्ने ‘ठूलो’ काम उनीहरूले गरेका छन्।
‘झन्डै नौ सय वर्षदेखि यो संस्कृति चलिरहेको छ,’ किरणले भने, ‘यसपालि कोरोना महामारीबीच गर्ने कि नगर्ने दोधार थियो। हामीले साधारण रूपमा भए पनि संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छौं।’
उनले समुदायको निर्णय जानकारी गराए, ‘पहिलेजस्तो भीडभाड गर्दैनौं। समुदायभन्दा बाहिरका मान्छेलाई डाक्दैनौं। मासु चढाउने विधि पनि दुई–तीन जनाले मात्र गर्ने कुरा छ।’
जय मनोहर महाविहारमा रहेको महांकाल मन्दिर। तस्बिर: सुदीप श्रेष्ठ/सेतोपाटी
छुट्टिने बेला मैले आफ्नो डर भनुँ कि जिज्ञासा किरणसमक्ष राखेँ, ‘के मासु काटेर चढाउँदा साँच्चै दुख्दै दुख्दैन?’
‘तपाईं पनि गरेर हेर्नुस् न!’
‘बाफरे! मजस्तो डरछेरुवाले कहाँ पाएर सक्नु! बरू तपाईंकी छोरीले के भनिन्? उनलाई कति दुख्यो रे?’ मैले गत वर्ष पूजामा सरिक किरणकी २० वर्षे छोरीका बारेमा सोधेँ।
‘कति कम?’ मैले अझै खिपेँ।
‘उसले अस्ति पिसिआर टेस्ट गरेकी थिई। नाकमा सुइरो घुसाउँदा दिनभरि दुखिरह्यो भन्दै थिई, त्यो दुखाईभन्दा कम।’
उनले अझै प्रस्ट पार्दै भने, ‘इन्जेक्सन लगाउँदा जति दुख्छ, त्योभन्दा पनि कम।’
(यो स्टोरी पहिलोपटक २०७७ कात्तिक ४ गते प्रकाशित भएको थियो।)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २८, २०७८, १७:११:००